China 87391 Parker hydraulic swivel ikiaka akwa akwa rụpụta na Factory | Topa
87391 Parker hydraulic swivel ikiaka akwa akwa
Nodị No.: 87391
Nrụgide: Nnukwu nrụgide, 3000psi
Okpomọkụ Ọrụ: Okpomọkụ dị elu
Eriri Type: Ndị ọzọ
Echichi: Ndị ọzọ
Ihe: Carbon Nchara
Ụdị: Ndị ọzọ
Isi Usoro: Flange Gburugburu
Ndidi: 0.01mm - 0.02 Mm
Ngwa: Hydraulic Elbow Fittings
N'elu: Zinc ịkwanye
Agba: White Ma ọ bụ Yellow
Akara: 87391 3000PSI Flange
Udi: Nnennen Flange Fittings
Product aha: Parker Hydraulic Swivel n'ikpere aka Fittings
Arụpụta: 500000 PC kwa ọnwa
Ahịa: Topa hydraulic akwa akwa
Ebe Mmalite: Hydraulic Elbow Fittings si China
Tụkwasịnụ Ikike: 500000 pcs Hydraulic Elbow Fittings kwa ọnwa
Akwụkwọ: Hydraulic Elbow Fittings ISO
HS Usoro: 73071900
Ngwunye ikuku nke Parker
Hydraulic Elbow Fittings Ihe na-enyocha: ijikwa ihe eji eme ihe, mezuo ụkpụrụ ndị achọrọ maka mba ụwa;
Nnyocha mbụ: Lelee nke mbụ Sooks Pipe Fittings na usoro ọ bụla.
Nke a rụchara nke sooks Pipe Fittingsinspection: na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ndị ọrụ na-enyocha nha dị ka eserese ma chọpụta eri na eriri nlele;
Nnwale akara mmepụta ihe: Onye nyocha nyocha ga-enyocha igwe, ahịrị na Sooks Pipe Fittings n’oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Emechara ngwaahịa nnyocha: ngalaba nyocha ga-anwale ma lelee tupu Hydraulic Elbow Fittings na-etinye zinc.
Mgbe efere zinc: ọ dịkwa mkpa ịlele nha Pipe Fittings size, crimp nut, nke ukwu na n'ikpeazụ lelee ọzọ, wee kpokọta ma buru ya
Ngwunye Hydraulic datas:
87391 3000PSI Flange, 90 CelsiusSAE Flange 3000PSI
NGWA NKE. AHNYA AH FL DN Kụrie F	 H	 B	 L
87391-16-16 1 ″ 25	 16	 44.4 Ogbe 68.5 38	 8.2
87391-20-20 1.1 / 4 ″ 32	 20	 50.8 Ogbe 79.5 43.2 8.2
87391-32-32 2 ″ 51	 32	 Ogbe 71.4 Ogbe 118.3 Ogbe 62.2 9.8
All Hydraulic Swivel Elbow Fittings; ndị ọrụ anyị na-agbakọta iwu n'ime ụlọ na katọn siri ike kechiri mkpuchi. Nchịkọta niile nke Hydraulic Elbow Fittings; ejiri ederede gosipụta nke ọma. Mgbe ahụ, anyị ga-etinye igbe n'ime igbe osisi nwere nnukwu akpa plastik.
Companylọ ọrụ TOPA bụ ọkachamara n'ichepụta na ire mmiri systerm. Ngwa hydraulic anyị gụnyere: :dị Hydraulic Elbow niile, ihe nkwụnye,Hydraulic sooks, High Pressure sooksmgbakọ na akụkụ ọla ndị ọzọ, yana ndị ọrụ maka ngwaahịa njikọ njikọ mmiri. Anyị na-enyekwa ọrụ Hydraulic Elbow Fittings OEM ọrụ.
A na-ejikarị Hydraulic Elbow Fittings eme ihe na mbara igwe, ụgbọ ala, ụgbọ mmiri, ọgwụ, kemịkal, mmanụ ala na mpaghara ndị ọzọ.
A na-ejikarị Hydraulic Elbow Fittings arụ ọrụ hydraulic na mmiri na-ebufe ngwaọrụ,
olulu mmanụ, nke m, ụlọ, njem na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
1. Kedu ka ị ga - esi hụ na njiri mara akwa akwa akwa hydraulic gị?
Anyị ga-eme ndokwa nkwenye Hydraulic Elbow Fittings tupu imepụta. N'oge mmepụta Hydraulic Fittings, anyị nwere ndị ọrụ QC ọkachamara na-achịkwa ogo na imepụta dịka ihe atụ egosipụtara. Anyị ga-ezitere gị akụkọ akụkọ anyị na akụkọ dị mma na nnyefe.
2. you na-enye ọrụ Hydraulic Elbow Fittings OEM ma ị nwere ike ịmepụta dị ka eserese anyị?
Eeh. Anyị na-enye ọrụ Hydraulic Elbow Fittings OEM. Anyị na-anabata nhazi omenala na anyị nwere ndị otu ọkachamara ọkachamara nwere ike ịmepụta Hydraulic Elbow Fittings dabere na ihe ị chọrọ. Anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa hydraulic ọhụrụ dịka ihe atụ gị ma ọ bụ eserese gị
3. Anyị nwere ike ịmepụta nkwakọ ngwaahịa maka Hydraulic Elbow Fittings?
Eeh, ị nwere ike igosi akụkụ nke katọn na pallet.
4. you na-enye ngwa ngwa Hydraulic Elbow Fittings n'efu?
Anyị nwere ike ịnye Hydraulic Fittings free samples na ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ ibu. Mgbe ị nyechara iwu, anyị ga-enyeghachi ibu
5. Kedu oge nnyefe gị maka iwu hydraulic Fittings?
N'ozuzu, anyị ga-ahazi mbupu na ụbọchị 25 mgbe ị natara ego ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị nwekwara ike mezuo ihe ị chọrọ
Na-achọ ezigbo Hydraulic Elbow Fittings Manufacturer & supplier? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. All Hydraulic Swivel Elbow Fittings bụ nke ejiri n'aka. Anyị bụ ndị China Mmalite Factory nke Parker ikiaka Fittings. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Ngwaahịa: Hydraulic Hose Fitting> American Hydraulic Fitting
Brass haịdrọlik sooks njide parker tube oyiyi akwa
14211 Ikiaka anaghị agba nchara ngwaike ọla kọpa pip ...
Swivel sooks haịdrọlik barb mgbali ígwè oyiyi akwa
reusable anwụrụ haịdrọlik mkpakọ ọnụ ụzọ ámá flexi ...
Camlock oyiyi akwa banjo oyiyi akwa haịdrọlik sooks ...
26711 dị ngwa njikọta haịdrọlik anwụrụ f ...